Olee otú iji iOS emulator maka Android | Android emulator
Dị ka mobile penetration na-accelerating, ngwa aghọwo n'elu azụmahịa maka ihe abụọ mobile sistem, android na iOS. Ha mpi erukwa na-ọbụna na-agụnye, arụmọrụ, atụmatụ, na-eji na-arụ ọrụ. Android a mepụtara Google mgbe iOS bụ Apple si nwa, android bụ oghe isi mgbe iOS si accessibility dị nta. Android si ngwa nwere ike-enweta site na Google Play Echekwala na iOS ngwa nwere ike inweta na Apple App Store. Mgbe ngwa mkpanaaka maka sistem nwere na-emekarị e okpukpu abụọ ona abụọ usoro, e nwere ụfọdụ iOS ngwa na ị ka nwere ike ịhụ maka Android na Anglịkan.
Asọmpi na ndị dị iche iche mere nke abụọ usoro nwere hụrụ na ha mere nwere otu coded ngwa. Android ugbu a na-arụ ewu ewu n'etiti mobile ọrụ mgbe iOS ka na-ekwusi ike ha na-akpata lekwasịrị ahịa. N'agbanyeghị na ọtụtụ ndị yiri ịhọrọ Android, ha ka chọrọ na-eche na ahụmahụ nke iOS ngwa na ha android ngwaọrụ. Na-aga n'ihu oganihu technology ugbu a na-imezu nrọ nke ọtụtụ android ọrụ na iOS emulator maka android. Ọ bụla android onye ọrụ nwere ike ibudata na android iOS emulator.
iOS emulator maka Android chọrọ
• Video osooso: akọrọ kernel ọkwọ ụgbọala na metụtara X ọkwọ ụgbọala; OpenGL, Njedebe / EDL
• Nchekwa: 61MB maka App faịlụ
• HDMI: video-si na abụọ framebuffer ngwaọrụ
• USB usu mode
Olee otú iji iOS emulator maka Android
1. Download faịlụ site na njikọ n'ebe a; http://files.cat/OCOcYpJH download faịlụ gị PC
2. Mgbe download zuru ezu, na-eziga ebudatara faịlụ gị smartphone site na eriri / Bluetooth, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ usoro ị na-ahọrọ. Usoro bụ ngwa ngwa mgbe mere na USB.
3. Kwupu eriri si gị smartphone na ịchọ faịlụ.
4. Wụnye ya site mmeghe ya na gị Njikwa faili omume
5. Mepee ,, Padoid "icon, Ị ga-ẹka ,, Họrọ Rom" Nkebi nke. Dị nnọọ Ibu Ibu egwuregwu ebe a. The ngwá ọrụ si nyere njikọ akwado ipas na zips.
6. Na-akpọ iOS egwuregwu na android.
Mgbe ị gụsịa wụnye na ihe niile dị mma. Nke a pụtara na ị pụrụ ugbu a enwe gị na-akparaghị ókè nso nke nhọrọ mgbe ọ na-abịa ngwa. Ma ihe ngwa bụ nanị maka iOS na ọ bụghị n'ihi Android, ma ọ bụ iOS version bụ mma karịa Android version, na-abụghị otu n'ime nsogbu gị. iOS emulator maka gam akporo ihu ọma mimics ngwa ọnụọgụ abụọ interface nke a mba ọzọ ọrụ usoro, na nke a, iOS. Nke a na ahụ doo ụlọ maka gị gam akporo ngwaọrụ na-agba ọsọ na-iOS ngwa unmodified. The emulator ele ezigbo mgbe eji gị ngwa, na-enye otu ahụmahụ na iOS ọrụ na onye ga na-eche na iji ahụ ngwa ị chọrọ iji wụnye na gị Android ekwentị.
Na a iwu nke 75% ahịa òkè, otu nwere ike-arịọ ya mere na ọ ga-ekwe omume chọta ihe ngwa mere maka iOS ma adịghị n'ihi Android. Mkpa mere na-agụnye, na ilekota nke Apple. Ọtụtụ ọrụ, ha na mmepe ga-ahọrọ Apple si mechiri emechi gburugburu ebe obibi nke a na-tightly-achịkwa. Eziokwu ahụ bụ na iOS ahịa dị njikere iji kwụọ ụgwọ maka ha ngwa n'adịghị maka Android nke na-eduga ọzọ revenue maka ngwa Mmepe na ha na-akwado ụlọ ọrụ. N'ụzọ ezi uche, mmepe ga-etinye uche ọzọ na-emepe emepe ọma ngwa maka iOS n'elu Android. Ọzọ mere na kasị ewu ewu na egwuregwu na nwere nnukwu okporo ụzọ. Iji elu ya niile, ogologo usoro nke Apple nnwapụta usoro nke ngwa ana achi achi àgwà ngwa na-uploaded. The ọzọ onye ọrụ na-atụ anya naanị àgwà ngwa, ihe mgbali e ka iOS ngwa Mmepụta iji hụ àgwà ha ngwaahịa, si otú ọzọ ịsọ mpi na ngwa na-enye ndị ọzọ na-akpali akpali ahụmahụ. .
The n'elu ihe-enye a eke ụzọ maka Android ahịa / ọrụ na-achọ ka nwere a obi na-adị nke iOS ngwa ezie na-enweghị ịzụ ihe iPhone ma ọ bụ iPad. Ọ na-emesi ike na architectural imewe na-eme ha obi ụtọ. Nke a adịghị iche niile iOS ngwa dị mma karịa Android ndị ezie na. iOS emulator maka Android bụkwa ezigbo maka mmepe na-achọ iji nwalee ha iOS ngwa na-enweghị na-eji ihe Apple ngwaọrụ, ịcha akwụ ụgwọ nke azụ.
Ka a na-ezo aka otu ngwá ọrụ nke emulating iOS na gam akporo. E nwere ọtụtụ oru ngo na nwere na ndị na-na-ka na-emepe emepe iOS emulators maka Android, n'ihi ya na-enye dịgasị oke ịhọrọ na a ga-ekwe omume nke ịchọta ọbụna ụfọdụ na-maka na-ere na ndị na-free. Kasị Android iOS emulator ngwaọrụ ga-abịa na ụkpụrụ nduzi na-esi eji ha, na-enye gị a nzọụkwụ site nzọụkwụ usoro nke nwere ike ịdị iche iche site onye e nyere dị n'isiokwu a. Ndị kasị mma nhọrọ bụ mgbe niile ka jiri ha tụnyere na a ikpe ndabere ma ọ bụ ọbụna anya na reviews site na ụfọdụ ndị ahịa na nke ga-enye gị a n'ozuzu nghọta nke ma uru na ọghọm nke ngwaọrụ. Na-aga n'ihu ọganihu nke technology, a ngwaọrụ nwekwara imelite na-aghọ ọbụna ndị ọzọ amamiihe, na-enye a mma ọrụ ahụmahụ.
> Resource> iOS> Olee otú Jiri iOS emulator maka Android